Oko Kufuneka Ukwazi Ngaphambi Kokubonisana ne-Psychic
Iseluleko seSage sokubonisana ne-Psychic
I-Do and Don'tts-Izikhokelo ze-Querent
Mayelana Neengqondo: Ngaphambi kokuba Ubonisane ne-Psychic | Isikhokelo sabathengi kwii-Psychic and Oracles | Iintlobo zeeNgcebiso ze-Psychic | Qaphela ii-Charletons kunye nabaculi be-Scam | Ngaba i-Psychics ibikezela ukufa? | IiNdaba zokuFunda ze-Psychic
Nceda ufunde Le Ngaphambi kokuba Ubonise i-Psychic
Ngaphambi kokuba ufowune i-psychic okanye uqale ukugubha loo makhadi aseTarot uthathe ixesha elifutshane ukucaca malunga nenjongo yakho ekufuneni iingcebiso. Gcina ukhumbule ukuba iilente zeengcali zengqondo ziyahluka.
Yenza umsebenzi wakho wesikolo njengomthengi . Jonga ngeenxa zonke ukuze ufumane umcebisi we-psychic ofanelekileyo phambi kokubhubha. Ukuba unqwenela ukwenza ukufunda ngokwakho kukho iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo ze-oracle ukubonisana nezimpendulo ze-intuiting.
Yenza kunye ne-Donts-Izikhokelo zokufaka imibuzo yakho
Khawucinge ngokubhekiselele kwiimfuno ezifunekayo okanye iimfuno zomntu xa ufuna isigqibo malunga nombuzo okanye imibuzo ofuna ukuyiphendula. Nazi izikhokelo ezimbalwa zokukunceda, ukuchasana, ibinzana imibuzo yakho ngendlela eya kukuhlangula ngayo iimpendulo ezilungileyo kakhulu. Khumbula, iimpendulo ezinemvelaphi azifaki kwiitye, zisekelwe kwizikhundla kunye namathuba.
Gwema u-EYE okanye HAYI imibuzo enjenge:
Ngaba ndiza kutshata kulo nyaka?
Ngaba umphathi wam undiphawule?
Ngaba ndiza kukhulelwa?
Ngaba ndiza kunqoba iloti?
Ngaba iqabane lam liyamkela?
Nangona le mibuzo okanye efana EYE okanye engekho imibuzo ingase ibhoxe entloko yakho uyazi entliziyweni yakho ukuba awuyi kuyaneliseka nge-EYE elula okanye akukho mpendulo kwizinto ezinjalo zokucindezela.
Musa ukuya khona. Impendulo, nokuba nguYebo okanye Hayi, iya kukukhokelela kwimibandela eyongezelelweyo eya kukushiya uzive ukhathazeke ngakumbi ngekamva lakho, Ndiza kutshata nini? Ngubani na ondiqhathayo? Kutheni malunga namawele? Ngaba uwamkelwa emfanekisweni? Ngaba ndimele ndiyeke umsebenzi? Imali engakanani? kwaye nakanjalo.
Yonke / okanye imibuzo iyamnandi ukubuza xa impendulo ayiyi kuba nzima kakhulu engqondweni yakho. Ukwenza i-pendulum ngokufunda ngesisu somfazi okhulelwe uye wenziwa ngamaxesha amaninzi ukuba ahlonele uMfana okanye Intombazana? umbuzo wesini. Kodwa, ngokubanzi (ngaphandle kwemibuzo efana ne-Boxers okanye Briefs? White okanye iGroat? Iphepha okanye iPlastiki?) Awuyi kuyaneliswa yimpendulo esheshayo.
Ukuba ufuna iimpendulo ezinzulu kwimibandela yakho, qalisa iseshoni ngokunika umfundi wakho ulwazi olunokwaneleyo ukuze akwazi ukuzithoba ngokujulile kunye nezakhono zakhe ezinembile.
Hlala ucacile kwimibuzo enokuthi:
Ngaba ndimele ndibize umama?
Ngaba ndifanele ndivutha igosa lam?
Ngaba ndifanele ndihambe kunye nentombi yam?
Ngaba ndifanele ndibuyele esikolweni?
Ngaba ndingayithenga imoto entsha?
IMIBUZO imele iphakame kakhulu imibuzo. Ngelishwa, IMIBUZO imele ibuzwe imibuzo yeengqondo kunye neemeko. Ngaba ufuna ngokwenene ukunika olo lawulo oluninzi kumntu omnye okanye ukukhwada okungahleliwe kwamatye? Ngaba ndifanele ndiyeke umsebenzi? Kwenene? Yilokho ufuna ukwazi? Kucacile ukuba, ukuba ubuza le mbuzo sele ucinga ukuyeka ukuyeka. Umbuzo ongcono unokuba: Kutheni ndinganelisekanga ngomsebenzi wam? Kodwa inyaniso, mhlawumbi sele uyayazi impendulo yalo mbuzo. Kuthekani ngokubuza into enjengokuthi Ndingayifunda njani ukuhamba kunye nabasebenzi abasebenza nabo kangcono? Okanye, yintoni emathuba am aphezulu omsebenzi? Phrase imibuzo yakho ngendlela enokuthi iimpendulo ezinikeziweyo ziya kukunika amandla okuqhubela phambili okanye ukudala utshintsho oluhle ebomini bakho.
Musa ukubuza NINI, KUYIphi na imibuzo ye-WHO - NINI na?
NINI ndiya kuhlangana noMnu?
Ndiya kufumana phi impumelelo?
Ngubani na onokumthemba?
Ukubuza imibuzo efana NINI na ndiya kuvuya kwakhona? Okanye ndiza kufumana phi umphefumlo wam? "imibuzo" engayenza iimpendulo eziza kukupenda kwikhoneni. Ukuba umfundi we-psychic ukunika impendulo ethile kulolu hlobo lombuzo qwalasela ukuba ungayenza ntoni ngale nkcazelo? Njengoko kukhwankqisayo njengoko kungenakukwazi ukuba NINI, NAPHO, kunye no-WHO kungcono ukungazibuza. Iimpendulo kulezi ntlobo zemibuzo zinokuthi zithathe umgangatho wentsimi ekugqibeleni unokukukhokelela kwisiqwenga esingabonakaliyo sokhula oluqingqiweyo kwindawo yokupaka eshiyiweyo.
Kutheni njalo? Ewe, kuxhomekeke kwindlela othembekileyo ngayo ekuphenduleni kwimibuzo enokuthi unokulahlekelwa yinto yakho engcono kunomnye umntu.
Akuyi kubuza umbuzo we-WHO. Awufuni ukugxila kwabanye abantu xa ufuna isiluleko esizayo malunga nawe. Gcina ukufunda kugxile kuwe kunye nokukhetha kwakho. Ngoko, qhubeka unemibuzo efana ne- WHO ingumgudu wam amaphupha am? engqondweni yakho kodwa ungayibeka phantsi kwitheyibhile yokubonisana. Ngaphandle koko unganikwa igama okanye inkcazo eya kugqiba ukunciphisa indawo yakho yokudlala okanye ukudibanisa lwakho uphando. Unokuba ukhangelele "intombazane enobungqingili" kodwa awufumani ngenxa yokuba wayedla iinwele zakhe ezibomvu, okanye uzethula kuwe usebenzisa igama lakhe eliphakathi kwaye ungamniki ithuba elide lokufunda igama lakhe lokuqala. Musa nje ukubuza i-WHO, kulungile?
Nasi omnye umzekelo wokufumana imiyalezo exutywe kwiinkcukacha zengqondo zengqondo malunga NAKHO apho umphefumlo wakho oza kufumaneka khona. Masithi utshelwe ukuba uya kudibana nomphefumlo wakho xa uhamba okanye uhamba eholide. Ngokusekelwe kwintoni umcebisi wakho onembile akuxelele ukuba uya kuqala ukuthatha ezinye iholide kunye neendwendwe zokuhamba ngeveki nangona ungeke ukwazi ukuwufumana? Okanye, ngaba unokuqala ukuphepha yonke imisebenzi yentlalo yendawo ngenxa yokuba ngoku ukholelwa ukuba awuyi kuhlangana nentloko yakho epheleleyo kwi-barbecue yommelwane wakho? Kutheni uchithe ixesha lakho ngokufanelekileyo? Kuthekani ukuba i-psychic yayingalunganga? Kodwa masithi i-psychic yayilungile kwaye ucinga ukuba udibana nomntu wakho umtshato xa uhamba ngeeholide. Kodwa imeko ebeyilungile yayiyinto eyahlukileyo kwizinto ozicingayo.
Ucinga ukuba udibana noSusan kwindawo yakho yebhabhi. Susan uze ube yi-BFF. USusan ukumema ukuba uhambe naye kwinqanawa yeentsapho ngaphaya kwekhefu lePrince. Yiyo xa udibana nomntakwabo uSteve ohlekayo ohamba ngokugqithiseleyo ukuba abe ngumlingane wakho womntu.
Ngenxa yokuba unqume ukungena kwibhola langoku, awuze uhlangane noSusan. Ngaphandle kukaSusan njengendlela yekotyi yakho kuSteve, ukudibana naye kuye kwabambezeleka. Okanye, ungagqiba ulahlekelwa yiThuthani yeThando ngokupheleleyo.
Umfazi oqhawule umtshato, ndazi nje wabuza umcebisi weengqondo ukuba uza kuphinda aphinde ashade (EYE eYONE okanye engekho umbuzo). Impendulo ye-psychic yayinguwebo. Ilunge kakhulu. Kodwa ke lo mbuzo wabuza i-WHO? Kwaye, ndiza kumhlangabeza nini? I-psychic, ngokuhlakanipha, yahlala icace ngokumnika ixesha elithile lokudibana nendoda yakhe yesibili inomdla. Kunoko, watshela lo mfazi ukuba yena kunye nomfana wakhe omtsha babe nesifundo se-karmic ngasinye sazo kufuneka bazibonele okokuqala ngaphambi kokuba kubekho intlanganiso yekhefu. Emva koko wakhupha imiba ye-karmic ukuba loo nto ibhinqe ukucoca ukulungela ubuhlobo bakhe obutsha obulindile kumaphiko. Ndicinga ukuba ndiyathanda loo ngqondo!
Buza YINI NEMIBUZO imibuzo. Buza:
YINTONI ndiyenza okulungileyo (okanye engalunganga)?
Yintoni endiyenza ngenye indlela?
Ndingafumana njani injongo?
Ndiqala njani ukuthanda mna?
Umbuzo ongcono kumfazi ofuna ukwazi ukuba uya kuphinda aphinde watshata: YINTONI ndingayenza ukuze ndityelele iqabane kwaye ndiphinde ndithande? Xa ubuza imibuzo yakho, gcina ugxininisa kuwe kunye nezenzo onokuzithatha. Oku kuya kukunceda ukuba ufumane into ongayenzayo, okanye oko ungakwenza ngokungafaniyo okuza kudala utshintsho olufunayo. Kuba umfazi ofuna ukukhulelwa ngokukhawuleza, unokubuza: INDLELA endiyenza ngayo umnqweno wam wokufumana umama nokukhusela umntwana? Umqeshwa othiyile umsebenzi wakhe, unokubuza ukuba: Yintoni endiyiyo ebomini bam obuchaphazela ukungonwabi kwam emsebenzini?
Mhlawumbi babuze iYANTONI imibuzo
Ukubuza OKUBA iimeko zokuphila ziye zafika kuwe kwiimeko zakho zangoku zizame ukubonakalisa inzuzo. Kungaba sisilumko ngezikhathi ezithile ukunikezwa ngombono omtsha malunga NAKHO izinto ezithile zenzeke kuwe. Nangona kunjalo, gcinani engqondweni ukuba elidlulileyo lidlulileyo. Nangona kukho izifundo ekufuneka ziqokelelwe ngokuhlaziya iimpawu zakho zangaphambili kunye nokuqonda imiphumo eyenzekayo ngenxa yokukhetha okanye izigwebo ezingekho kakuhle, ukugoba kwixesha elidlulileyo aliphilile. Ukuzisola ngumvakalelo osetyenziswe kakuhle ukudala umnqweno wokutshintsha iinguqu eziphathekayo, akushiyi kwiintlungu . Hlala ucace kuyo nayiphi na imibuzo enokuthi ichaza njengexhoba elinjengesizathu sokuba ndiyintoni na? okanye NGANI na mna? Khetha i-WHY imibuzo yakho. Ngokufanelekileyo sebenzisa iimpendulo ukuze uphumelele kwiimvavanyo ezizayo. Ukuqonda IIMBUZO ngawe kunye nobudlelwane bakho kunokukwenza uhambo lwakho lwangoku lube luhambo olungcono.
Ukuhlanjululwa kuyindlela yokukunikwa amandla ngolwazi olunokuvula iminyango kuwe kwaye kukuncede ukhule ngokomoya kwaye ube ngumntu onwabileyo. Gcina imibuzo yakho igxile kuwe. Sinalo ukulawula okuncinci okanye akukho nto ekulawuleni kwabanye. Ukuzisa ukuziphatha kwabanye kwiindawo zakho zokubonisana ne-oracle akuyi kukuthandayo okanye kukuxhobisa ubomi bakho kunye nokuziphatha. Akukho nto iphosakeleyo ngemibandela onayo malunga nobomi bakho nobudlelwane bakho. Nangona kunjalo, ukuphawula imibuzo yakho kukunceda wena indlela engcono.
Umbuzo: Kutheni umfana wam ekhusele?
Umbuzo ongcono: Ndingathanda ukuchitha ixesha elininzi kunye nesoka lam. Ndingayinceda njani ubuhlobo bam kunye naye?
Umbuzo: Kutheni umphathi wam wenqaba ukucela ukunyuswa?
Umbuzo olungcono: Ndingenza ntoni ukuze ndiphumelele ngakumbi?
Umbuzo: Ndingenza njani abazali bam kunye nabantakwethu bandihlonele?
Umbuzo olungcono: Kutheni ndijongene nolwalamano lwentsapho?
Iintlobo zeeNgcebiso ze-Psychic kunye nee-Oracles
Ukufunda kweTe Leaf
Iinkqubo ezongezelelweyo zokuzihlukanisa
Ukuphilisa Isifundo Sosuku: Januwari 09 | NgoJanuwari 10 | NgoJanuwari 11
Ukutyalwa: Okubalulekileyo kwiiKhenketho eziKhuphiswano
Amanqaku amaNdiya amantombazana athandekayo kunye nokuthetha kwabo
Ukuguqula iiMitha zeCubic ukuya kwiLitha-m3 ukuya kuL Example Inkinga
Iiwebhusayithi ezili-6 kunye neGeorgeing Gearboarding Gear Equer
I-Poner: Isenzi seSpeyin seNinzi ezininzi
Isibingelelo se-Aztec - Iintsingiselo kunye nokuSebenza kweMexica yokuBulawa kweNkundla
Indlela yokuLahla i-Musty Smell kwiincwadi
Iiflethi eziMnandi zokuPenda
I-MySQL Ifayile yokunquma kwiFPP